Lamar Odom oo ey heysato labo daran mid dooro. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada hollywod Lamar Odom oo ey heysato labo daran mid dooro.
Friday, June 30, 2017 Bulshada , hollywod Edit
Bulsha:- Khloe Kardashian oo ah xaaska Lamar Odom, ayaa weli ku dadaaleysa ninkeeda Lamar Odom oo cisbitalka ku jira, waxaana laacibkii hore ee kubadda kolayga heysata labo daran mid dooro, maadaama qooyskiisu leeyahay usoo wareeg magalada New york, halka xaaskiisu ku qancineyso inuu ku sugnaado magaalada Los Angeles.
Lamar Odom ayaa hadda soo caafimaadaya, kadib marki uu isbitaalka galay 13-kii October, waxaana xaaskiisa Khloe Kardashian oo Kim Kardashian walaasheed dadaal badan ku bixisaa inuu sii joogo magaaladaan, si caafimaadkiisa ula socoto.
Lama oga qo’aanka uu qaada doono Lamar, laakiin warar hoose ayaa sheegaya in labada uu dhaxbaxayo, magaala cusubna uu usafrayo.